Idatha enkulu nobuhlakani bokufakelwa kokuphathwa kwamanzi kangcono | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esikhathini esedlule besikhulume ngokuthi kancane kancane i- Idatha enkulu ku-meteorology Izoguqula indlela yokwenza nokutadisha. Angaqashelwa kanjani "amehlo" abonayo ukuthi yini i-priori. IBig Data ingena ngokushesha emikhakheni eminingis, futhi isivele isetshenziselwa ukuphathwa kwamanzi okungcono. Kanye ne-Artificial Intelligence (AI) nezinzwa, kuyinto eqhubekayo. Kulindeleke ukuthi ngo-2025 lobu buchwepheshe bungasiza ekuphathweni nasekusatshalalisweni kwamanzi, futhi kunciphise ukuvuza kwamanzi ngo-50%.
Omunye we Izinkinga i-UNESCO egxile kuzo mayelana namanzi, abaphathi. Njengoba ukuguquka kwesimo sezulu kuqhubekela phambili, kanye nokuphathwa kabi okwenziwe, kuyadingeka ukuthi kubhekwe amathuluzi akwazi ukwenza ngcono nokwenza ngcono izinqubo. Kuleli qophelo, iBig Data ne-AI ziqala ukubona ukukhanya kwendlela yokusebenzisa amanzi ngokuphumelelayo nangokukhalipha.
Iphrojekthi ye-WatERP, ifuna ukusebenziseka kwamanzi
I-WatERP, iphrojekthi uxhaswe yi-European Commission. Inhloso yawo ukucinga izixazululo ezihlakaniphile zomthombo wamanzi. Njengoba ubona (ngokuchofoza lapha) yiwebhusayithi evulekile yamazinga ekuphathweni komhlahlandlela esigabeni ngasinye somjikelezo. Kusuka kudatha nolwazi oluqoqwe kuyo, zifaka konke okuphathelene nokunikezwa kwamaphoyinti, izindawo, amashejuli okwelashwa, nolunye ulwazi lwezomthetho nolwezulu.
Isikhulu esiphezulu seLibelium uDavid Gascón, uchwepheshe we-hydroinformatics, ukhombisa lokho ukuphathwa kwamanzi njengamanje kusekelwe kudatha yomhlaba, kepha kufanele kube ngokwasendaweni. ILibelium inkampani ekhethekile ekwakhiweni kwezinzwa eziqoqa futhi zithumele imininingwane ukuze ubuhlakani bokufakelwa bukwazi ukuyicubungula ngokushesha. Emagameni kaGascón, izilinganiso zasendaweni, isibonelo somfula, esikhundleni sokuthatha idatha kusuka kumaphoyinti ahlukene ama-3, kufanele yenziwe ngamaphoyinti angama-300, ukuthola umbono ngobuso namehlo, ngokwenzeka kuleyo ngxenye yomjikelezo.
Kancane kancane lobu buchwepheshe sebusetshenzisiwe emadolobheni afana neBarcelona, ​​lapho amanzi ezinhlelo zokunisela ancishiswe ngama-25%. Okuthile okukhombisa ukuthi ukuphathwa kwedatha okuhle kunezinzuzo ezinkulu zeplanethi yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Idatha enkulu nobuhlakani bokufakelwa kokuphathwa kwamanzi kangcono